Audacity 3.1.0 inonatsiridza kurongeka neshanduko nhatu dzinobatsira | Linux Addicts
pablinux | 29/10/2021 20:24 | Free Software
Zvinhu zvakamboti dzikamei, asi hapana chichazofanana zvakare. Audacity yakawanikwa neMuseCore, uye nepo zvatinoona zvisati zvachinja, vanounganidza telemetry data. Nechikonzero ichocho, izvozvi handizive nezve chero kugoverwa kweLinux kunosanganisira shanduro dzichangoburwa muzvinyorwa zvepamutemo, asi zvakaita seSnap, Flatpak uye. AppImage. Kunyangwe ichiita se "Beta" muscreenshot, yave kuwanikwa Audacity 3.1, avhareji yekuvandudza ine nhamba pfupi yezvinhu zvitsva.
ari shanduko dzakaunzwa muAudacity 3.1 pane matatu. Yekutanga yakakosha zvekuti yakatoita kuti rimwe remabhatani matanhatu ekugadzirisa rinyangarika. Mune shanduro dzakapfuura, pataida kufambisa wave taifanira kusarudza bhatani rine museve une misoro miviri. MuAucacity 3.1 zvichienda mberi ingo dhonza kubva kumusoro bar, kwainoisa zita redhiyo faira.
Audacity 3.1 inouya nebhatani rimwe shoma
Yechipiri yekuchinja inoita sediki, asi hazvisi. Mushanduro dzakapfuura, kana tikacheka kana kudzoreredza masaisai, zvatakabvisa zvaizopera zvachose. Zvino avo kucheka kana kupatsanurwa hakuparadzi, ndiko kuti, isu tinogona kucheka kana kudzora wave uye kudzoreredza iyo yakadzimwa nekudzvanya pamupendero uye kudzoreredza saizi. Chekupedzisira, vaitazve loop chishandiso kuita kuti zvinhu zvive nyore.
Sezvatataura, kutengwa kweAudacity neMuseGroup, kana kunyanya kuunganidzwa kwe telemetry, kwaita. Kugoverwa kweLinux hakuchagadzirisi mapakeji kune yazvino vhezheni, saka vashandisi veLinux vanoda kushandisa Audacity 3.1 vanofanira kusarudza pasuru yayo Snap, flatpak kana yako AppImage. Imwe sarudzo ndeyekuiunganidza pachedu, kana isu isu tiri pakugovera kunoenderana neArch Linux vanogona kuimisa kubva kuAUR. Zviripachena kuti shanduko yevaridzi haina kutifarira, asi ini ndinofunga kuti Audacity ichiri yakanakisa sarudzo yekugadzirisa odhiyo muLinux, uye neaya azvino nhau, zvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Audacity 3.1 inonatsiridza kugadziridza neatatu anobatsira shanduko, senge isiri-inoparadza clipping